Ku cusub IswiidhanActuellement sélectionné
Barashada bulshada – Ku saabsan Iswiidhan
Buuga ”Ku saabsan Iswiidhan” oo dhowr luqadood
Halkan waxa aad ka akhrin kartaa wax ku saabsan sida ay bulshadu u shaqayso Iswiidhan. Halkan hoose waxad toos uga helaysaa warbixin ku saabsan dhawr su´aalood oo kuwa ugu badan ah.
Waxaan rabaa inaan ogaado warbixin ku saabsan magangelyo
Yaan la xiriiraa hadaan rabo inaan magangalyo ka dalbado wadanka Iswiidhan?
Hadaad joogtid wadanka Iswiidhan waxaad la xiriirtaa hey’adda laanta socdaalka si aad u codsatid magangalyo.
Shuruudahee leeska rabaa si aan u dalbado magangalyo?
​Bogga internetka ee hey’adda laanta socdaalka ayaad ka akhrisan kartaa shuruudahee leeska rabaa si loo dalbado magangalyo.
​Waxaan rabaa inaan ogaado warbixin ku saabsan sharciga deggenaanshaha
Waxaa jira sababo kala duwan oo aad u codsan kartid sharci deggenaansho. Hadaad timaadid Iswiidhan isla markaana aad dalbatid magangalyo waxaad fursad u leedahay in laguu ogolaado sharci deggenaansho oo daa’im ah hadii codsigaada la aqbalo.
Akhriso Faahfaahin dheeraada oo ku saabsan boroseeska loo maro laga bilaabo magangelyo dalabka illaa shaqada.
Imisa qeybo oo sharci deggenaansho ayaa jira sidee ayaana u raadsan karaa?
Sharciga deggenaanshaha waxuu ukala qeybsamaa qeybo kala duwan, faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qeybaha kala duwan sharciga degganaanshaha ka akhriso hey’adda laanta socdaalka boggeeda internetka
Si aad wax uga baratid wadanka Iswiidhan waxaad u baahantahay sharci degganaansho.
Si aad ula soo degto qof wax kuu ah oo deggan wadanka Iswiidhan waxaad u baahan tahay sharci degganaansho.
Si aad uga shaqeeysid wadanka Iswiidhan waxaad u baahan tahay sharci degganaansho.
Waxaan helay sharci degganaansho, maxaan sameeyaa hadda?
Akhri warbixin dheeraada oo ku saabsan sida eey u shaqeeyaan magangelyada iyo boroseeska degitaanka iyo is meeleynta.
Faahfaahin dheeraada oo ku saabsan waxyaabaha lagaa rabo markaad heshid sharciga deggenaanshaha ka akhriso hey’adda laanta socdaalka.
Markaad sharciga deggenaanshaha heshid waxaad isla markiiba iska diiwaan galisaa xafiiska cashuuraha.
Caawimaadee helayaa markaan helo sharciga deggenaanshaha?
Qofka helay magangelyo, da’diisuna u dhaxeeyso 20 iyo 64 sano waxuu xaq u leeyahay inuu helo macluumaad ku saabsan mujtamaca loogu dhigo luqaddiisa hooyo. Degmada aad degantahay ayaa mas’uul ka ah bixinta macluumaadka ku saabsan mujtamaca oo loogu tala galay dadka soo galootiga ah. Waxaad akhrisan kartaa faahfaahin dheeraada oo ku saabdan macluumaadka mujtamaca isla markaana waxaad soo dejisan kartaa buugag ka hadlaaya wadanka Iswiidhan oo ku qoran luqado kala duwan.
Waxaad xaq u leedahay qorsho meeleyn ama deggenaansho (hadii aadan laheyn shaqo buuxda, aad dhigatid dugsi sare, aad ka weyntahay 65 sano ama aad cuuriyaan aanan shaqeyn karin). Xafiiska shaqada ayaa mas’uul ka ah inuu soo baxsho qorshaha meeleynta asigoo wadatashi kula yeelan doono.
​Waxaan u baahanahay inaan guri ka helo Iswiidhan
Ma leega caawin karaa inaan helo guri?
Markaad heshid sharciga deggenaanshaha waxaad caawinaad ka helikartaa hey'adda socdaalka si aad u degto degmo haddii aad deggan tahay xero qaxooti.
Adiga xataa waxaad ka raadsan kartaa bogagga ka hadlaya degmooyinka Iswiidhan ee halkaan oo laga helo warbixin ku saabsan Iswiidhan. Waxaad gashaa khariidada adeega.
Halken degi karaa?
Waxaad u guuri kartaa meel alle meeshii aad doonto oo waddanka ah. Waxaa adkaan karta inaad hesho deggaan, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. Haddii aad xaq u leedahay kaalmada la qabsiga oo aad deggan tahay xero qaxooti waxaad ka heli kartaa caawinaad hey'adda socdaalka inaad hesho degaan meel ka mid ah degmooyinka Iswiidhan.
Waa maxay farqiga u dhaxeeya guryaha la kireysto iyo guryaha leh xuquuqda lahaanshaha?
Waxaa jira guryo nuucyo kala duwan leh tusaale ahaan kuwa la kireysto iyo aad gadaneysid.
Maxaa muhiim ah in lagu fikiro markaad heshid guri aad leedahay?
Waxyaaba badan ayaa la rabaa in aad sameeysid markaad guri heshid. Marka aad guuretso waxaad sameyneysaa wargelin guurid ee xafiiska canshuuraha si aad u heshid diiwaan gelin cinwaan sax ah. Waxaad u baahantahay inaad sameeysatid ceymiska guriga iyo waxaad kaloo u baahan tahay inaad la xiriirto shirkad korontada soo daaysa si aad gurigaada ugu heshid koronto. Haddaad tahay qaxooti oo aad u baahan tahay inaad deynsato lacag si aad ugu soo iibsato agab guri iyo waxyaale kale ee gurikaada ah, xaaladaha qaarkood waxaad ka dalban kartaa deynta agabka guriga CSN ka. Waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay kaalmada kirada guriga waxaadna ka raadsan kartaa xafiiska ceymiska.
Shaqo iyo iskoollo sidee ah ayaa ka jira degmada aan rabo inaan dego?
Warbixin ku saabsan degmo kasta waxaad ka akhrin kartaa boggaan oo ka hadlaayo warbixin ku saabsan wadanka Iswiidhan, waxaa kaloo jira khariidad aad ka arki kartid waxyaabaha laga helo degmada aad degan tahay. Dooro degmo kadibna guji darafka khariidada adeega ama ku qor ciwaan ama magac degmo meesha wax lagu qoro ee bogga koowaad ee websaaydka, markaas waxaad toos u abaareysaa goobta aad rabtid in aad aragtid.
​Waxaan rabaa inaan barto luqadda iswiidhishka
Hel koorso Swiidhish ah
Khariidadyaasha adeega ee ku yaal meelaha lagu soo bandhigo degmooyinka waxaad ka heleysaa degmadaada xarunteeda lagu barto luqadda iswiidhishka ee loogu tala galay dadka qaxootiga ah ee sfi.
Raadi degmadaada ee riix geftinka Khariidadda adeegga. Riix calaamadda ka horreysa ’’Waxbarasho’’ ee khariiddadda hoosteeda ah.
Waxaad kaloo sfi ga ka raadin kartaa degmadaada boggeeda internetka qeybta ku saabsan waxbarashada.
Swiidhishka ka baro intarneetka
Halkan Macluumaadka ku aaddan Swiidhan waxaad iskaa uga baran kartaa Swiidhish. Swiidhishka ka baro macluumaadka ku aaddan Swiidhan.
​Waxaan rabaa inaan waxbarashadeeda ku isticmaalo wadanka Iswiidhan
Ma isticmaali karaa shahaadadeyda ajnabiga ah wadanka Iswiidhan?
Guddiga jaamacada iyo waxbarashooyinka sare ayaa qiimeynaya shahaadooyinka ajnabiga ah ee heer dugsi sare, heerka dugsiga sare ka dambeeya, heer xirfadeed iyo heer jaamacadeedba.
Waxaad isticmaali kartaa sawirrada filinka oo kale ah si aad heshid leeman warbixin dheeraada ku siinaya.
Machadyada iyo jaamacadaha ayagaa qiimeynaya sida laguugu xisaabin karo waxbarashadaada aan dhameystirneyn. Warbixin dheeraada oo ku saabsan arrintaas sawirka filinka ah ee ku saabsan jaamiciyaasha ajaanibta ah.
Guddiga jaamacada iyo waxbarashooyinka sare boggooda internetka ayaad ka heleysaa wax kasta oo ku saabsan shahaadooyinka ajnabiga ah.
Sidee leeygu ansaxin karaa waxbarashadeeyda?
Waxaad warbixin dheeraada oo ku saabsan xirfadaha kala duwan ka heli kartaa halkaan warbixin ku saabsan Iswiidhan.
Guddiga jaamacada iyo waxbarashooyinka sare ayaa qiimeynaya waxbarashadaada, qiimeyntaas ayaana asaas u noqonaya hadii uu tusaale ahaan shaqa bixiyaha u arko in waxbarashadaada eey u dhigmato sida waxbarashada iswiidhishka.
Waxaa jira xirfado cayiman sharcina uu ka yaallo si looga shaqeeyo sida tusaale ahaan inaad shahaado heeysatid ama inaad teesare heeysatid ama waxyaabo kaloo guud. Bogga internetka ee guddiga jaamacada iyo waxbarashooyinka sare ayaa ka heleysaa liis eey ku qoran yihiin waxbarashadaha qasabka eey tahay in marka la nidaaminayo qaanuunka la raaco.
Wadanka Iswiidhan maleega aqoonsan karaa cilmixirfadeedkeeyga?
Xafiiska shaqada ayaa haaya warbixin dheeraada oo ku saabsan xirfadaha iyo caawimaada aad heli kartid.
Waxaad xataa isticmaali kartaa boggooda waxraadiska si aad u ogaatid warbixinta ku saabsan xirfadaada. Waxaad ku qortaa xirfadaada kadibna guji raadi. Kadibna waxaad doorataa darafka sifeynta xirfadda, meeshaas ayaad ka akhrin kartaa waxbarashada leeska rabo.
Waxbarasho xirfadeed oo ah heer waxbarasho oo ka dambeeya heerka dugsiga sare waxaa qiimeynaya guddiga jaamacada iyo waxbarashooyinka sare.
​Qof is masruufaya aan raba ina noqdo
Sidee aan shaqo u raadsada?
Waxaa jira qaabad kala duwan ee shaqo loo helo. Waqti dheer ayeey qaadan kartaa inta aadan helin shaqo. Waa muhiim inaad dhaqsi ku baratid luqadda iswiidhishka. Waxaad shaqo ka raadsan kartaa halkaan warbixin ku saabsan Iswiidhan. Hadaad rabtid inaad iskaa shaqo u raadsatid waxaad isticmaali kartaa bogga ka raadso shaqooyinka bannaan gudaha shaqo & waxbarasho.
Hadaad rabtid inaad ka raadsatid meesha aad degan tahay isticmaal soo bandhigga degmadaada. Meeshaas waxaa ka heleysaa daraf la dhaho shaqoyinka ka bannaan degmadaada iyo nawaaxigeeda waxaa kaloo jira khariidada adeega oo aad iyadana shaqooyinka ka arki kartid.
Xafiiska shaqada waxuu haya talooyin dheeraada oo ku saabsan sida shaqo lo helo.
Caawimaad ma ka heli kara shaqo raadinta?
Hadaad wadanka ku cusubtahay xaqna aad u leedahay waxqabadka meeleynta waxaad caawimaad ka heleysaa xafiiska shaqada si aad shaqo ugu heshid sida ugu dhaqsiyaha badan.
Xafiiska shaqada waxuu kaloo kaa caawinayaa inaad heshid koorsooyin iyo caawimaad kuu fududeeynaya shaqo raaditaankaada.
Xafiiska shaqada waxuu leeyahay bogag shaqo raadinta loogu tala galay.
Luqada iswidishka tababar ma ku sameeyn kara goobta shaqada?
Hadaad xaq u leedahay waxqabadka meeleynta waxaad baraaktiik ka heli kartaa goob shaqo halkaasoo aad kor ugu qaadi kartid luqadaada iswiidhishka.
Shaqooyinke u dhow meeshan dagganahay?
Waxaad gashaa soo bandhigidda degmadaada waxaadna ka raadisaa gudaha shaqooyinka bannaan ama khariidada adeegga.
See u marayaa ina noqdo iskiis u shaqeeyste?
Xafiiska shaqada caawimaad waad ka heleysaa hadaad rabtid inaad baroobeysid fikradaada iyo hadaad rabtid inaad wax ka baratid waxyaabaha leeska rabo si aad u furatid shirkad.
Verksamt waa webside kuu haya macluumaadka aad u baahantahay oo dhan si aad u furatid shirkad.
Nyföretagarcentrum waa talo siin lacag la’aan ah waxeeyna ku taal meelo badan oo Iswiidhan ka mid ah.
​Waxaan rabaa inaan ogaado waxa eey qabtaan hey’addaha dowladda ee kala duwan oo aan la xiriiro
Hey’adda laanta socdaalka baartaa codsiga dadka raba ineey soo booqdaan, ama degaan ama raba ineey gabbaad ka dhigtaan wadanka Iswiidhan ama kuwa raba in la siiyo sharciga dhalashada ee Iswiidhan.
Xafiiska shaqada waxuu mas’uul ka yahay tusaale ahaan in dadka wadanka ku cusub eey helaan qorsho meeleyn iyo inaad sida ugu dhaqsiyaha badan ugu heshid shaqo wadanka Iswiidhan.
Xafiiska ceymiska waxuu qaabilaa codsiyadaada ku aadan lacagta gunnada ee dadka qaxootiga ah. Waxeey qiimeynayaan hadaad xaq u leedahay lacagtaas weyna ku siinayaan hadaad xaq u leedahay.
Waxaa jira lacago badan oo la bixiyo. Waxaa ka mid ah lacagta kaalmada guriga, kaalmada carruurta, kaalmada fasaxa waalidka iyo lacagta markaad jiran tahay in ka badan 14 maalmood.
Xafiiska canshuuraha waxuu mas’uul ka yahay canshuur celiskaada iyo kontoroollo kale si aad u bixisid canshuur sax ah. Waxeey kaloo mas’uul ka yihiin diiwaan galinta dadka iyo waxey bixiyaan warqadda caddeynta qofka. Xafiiska shaqada waxuu kaloo sameeyaa ID-ii kaarka.
Booliska waxuu baaraa damiyada kala duwan waxuu ka shaqeeyaa sida looga hortagi lahaay dambiyo cusub.
Degmada waxaa ka jira wax lagu magacaabo adeega bulshada. Weey kala duwan yihiin sida eey uga howl galaan degmooyinka kala duwan. Adeega bulshada waxuu raacaa sharciga adeega bulshada oo ka hadlaya xaqa aad u leedahay inaad qaadatid ceyrta, caafimaadka iyo daryeelka. Hadaad dhibaato dhinaca dhaqaalaha ku heysato oo aadan is biili karin waxaad codsan kartaa ceyrta. Waxaad gashaa degmada boggeeda internetka kana akhri shuruudaha leeska rabo.
Wakaalada gaadiidka ayaa bixisa oggolaanshaha leesinka baabuurka.
Haddaad rabto inaad ogaato faahfaahin badan waxa khuseeya marka aad heysato leeysin wadan kale waxaad booqan kartaa bogga maamulka gaadiidka.
​Waxaan rabaa inaan ogaado meesha aan aadayo hadaan xanuunsado oo aan daawo u baahdo
Halkeen ka helaa dhakhtarka ilkaha?
Waxaad gali kartaa degmadaada bandhiggeeda meesha eey ku taal khariidada adeegga. Waxaa markaas kuu soo baxeeyso meel eey ku qorantahay caafimaadka iyo daryeelka bukaanka. Hadaad falaarta ku kor heeysid waxaad ka akhrisan kartaa meesha aad ka heli kartid dhaqtarka ilkaha. Ku guji meesha calaamadeesan si aad warbixin dheeraada u ogaatid.
Waxaad kaloo gali kartaa bogga daryeelka caafimaadka ee 1177 oo aad ka raadin kartid daryeelka ilkaha.
Halkeen aadaa markaan xanuunsado?
Hadaan xanuun emerjensi ah ku haaynin waxaad aadi kartaa rug caafimaad. Waxaad gali kartaa bandhiga degmada aad degan tahay waxaad ka sii aaddaa darafka khariidada adeegga kadibna guji caafimaadka iyo daryeelka bukaanka. Hadaad falaarta ku kor heeysid waxaad ka akhrisan kartaa meesha aad ka heli kartid rugta caafimaadka kuugu dhow. Ku guji meesha calaamadeesan si aad warbixin dheeraada u ogaatid.
Waxaad kaloo gali kartaa bogga daryeelka caafimaadka ee 1177 oo aad ka raadin kartid rug caafimaad.
Waxa kale oo aad warbixinta daryeelka jirrada ka wici kartaa telefoonkan 1177. Waxa ay kugu caawin karaa talo bixin iyo in aad timaaddo goobta saxda ah ee daryeelka caafimaad.
Skåne,gobolka Stockholm, iyo Västra Götaland weey soconeysaa in laga helo talo siin daryeelka bukaanka ayadoo la isticmaalayo tarjumaan carabi ah ama soomaali. Talosiinta waxaa sameynaya kalkaalisooyinka rasmiga ah ee 1177 Vårdguieden ayadoo la adeegsanayo tarjumaan.
Talo siinta daryeelka bukaanka ee tarjumaanka carabiga 0771-117790
Talo siinta daryeelka bukaanka ee tarjumaanka soomaaliga 0771-117791
Haduu xanuunka emerjensi yahay waxad wacdaa 112.
Waxaan u baahanahay daawo, halkeen kasoo gataa?
Wadanka Iswiidhan waxaad farmashiiyaha ka soo gadaneeysaa daawada uu dhakhtarkaada kuu qoray bis. Waxaa jira farmashiiyayaal badan laakiin waxaa ugu fudud inaad aadid kan kuugu dhow ama kun u dhow rugtaada caafimaadka.
Daawada aan u baahneyn inuu dhakhtar kuu qoro waxaa laga iibsan karaa dukaamada cuntada.
​Waxaa raba inaan la kulmo dad xiiseeya waxa aan aniga xiiseeyo
Maxaa yaallo oo laga qabtaa degmadeeyda?
Waxaad isticmaali kartaa degmadaada bandhigeeda si aad u heshid howlo firfirconi iyo jaaliyadaha kaa ag dhow.
Degmooyinka badankood waxeey leeyhiin liiska diiwaan galinta jaaliyadaha, halkaas ayaad isticmaali kartaa hadaad raadineysid jaaliyad. Khariidada adeegga oo ku taal bogga lagu soo bandhigo degmooyinka waxaad ka heli kartaa howlo firfircooni oo kala duwan.
Waxaad kaloo ka raadin kartaa bogga jaaliyadaha iyo ururyada. Halkaas waxaa ka heleysaa leeman ku xiraya ururyo badan isla markaana aad ogaan kartid waxyaabaha ee ururyadaas sameeyaan.
Si fiican oo lagu barto swiidhishka waa in lala hadlaa dad horbaba yaqaanna swiidhishka.
Haddii aad adeegsato Weebka Weebka "La jirka kuwa kale ku tababaro swiidhishka” waxaad heleysa fursad aad xiriir kula yeelato dadyoow af-iswiidish ku hadla, oo ka caawinna barashada af-iswiidishka.
​Waxaan rabaa inaan ogaado caawiska kale oo aan heli karo
Badanaa maktabada ama jaaliyadaha iyo ururyada kala duwan ayaa waxeey sameeyaan howlo kala duwan si eey kaaga caawiyaan sidii aad si fudud kusoo gali laheyd mujtamaca iswiidhishka ama sidii aad tababar ugu sameyn laheyd luqadda iswiidhishka. Waxaad isticmaali kartaa khariidada adeega ee degmadaada si aad u ogaatid maktabada kuugu dhow halka eey ku taal.
Sideen ku ogaan karaa sida eey waxyaabaha kala duwan ee wadanka Iswiidhan u shaqeeyaan?
Meeshaan la dhaho warbixinta ku saabsan Iswiidhan waxaad ka heleysaa jawaabo ku saabsan su’aalahaada qaar badan oo ka mid ah waxaadna jawaabaha ka heleysaa qeybaha kala duwan ee webside ka, waxaad kaloo ka heleysaa warbixin dheeraada.
Yaa xaq u leh barashada hanuuninta bulshada?
Adigaadaan xaqa u leh in la siiyo qorshaha meeleynta ee xafiiska shaqada waxaad kaloo xaq u leedahay barashada qaabka mujtamaca uu u shaqeeyo. Waxaadna warbixin dheeraada ka dalbaneysaa qofka mus’uulka kaa ah ee xafiiska shaqada.
Waxaa kaloo xaq u leh
Qofkii ka yimaadaa wadan ka baxsan midowga yurub/Iswiisarland.
Hadeey da’daada u dhaxeeyso 18-64 sano.
Hadii aad heshay sharciga deggenaanshaha qaraabo kusoo dalbatay aawgeed
Hadii aad ka diiwaan gashantahay wadanka Iswiidhan.
Buuga ku saabsan Iswiidhan oo la akhristo marka la baranayo sida eey bulshada u shaqeeyso waxaa lagu fasiray luqado badan waana lacag la’aan in lasoo dajisto.
Caawimaad dhinaca leyliska ah ma heli karaa?
Waxaad fiirisaa khariidada adeega ee degmadaada Halkaas ayaad ka heli kartaa hadeey jiraan meelo dadka looga caawiyo casharada iyo leyliska.
Qaar badan oo ka mid ah ururyada rayidka waxeey siinayaan dadka caawimaad leylis. Waxaad tusaale ahaan fiirisaa laan qeybta cas khariidadeeda caawimaada casharka.
Hey’adda badbaada caruurta xataa iyo kuwo kaloo la mid ah waxeey hayaan howlo eey dadka ugu caawiyaan casharadooda.
Waxaad ka sii raadisaa ururyada kala duwan bogaggooda internetka waxaadna ka raadisaa shaqada guriga.
Ma jirtaa meel leeskula kulmo si tababar loogu sameeyo luqadda iswiidhishka?
Qaar badanoo ka mid ah ururyada bulshada rayidkaa waxeey hayaan fursado eey dadka ku siinayaan ineey tababar ku sameeyaan luqadda iswiidhishka sida kafeteeriya yaasha luqadda.
Sida caadada ah degmooyinka badankood meelaha luqadda lagu barto waxeey ku dhex yaalliin maktabadaha, soo ogoow hadeey degmadaada saas camal eey tahay.
​Waxaan rabaa inaan wax ka ogaado siduu iskoolka uga shaqeeyo Iswiidhan
Carruurta oo dhan waa qasab ineey dhigtaan dugsiga hoose dhexe. Waajibkaas waxuu bilaaanaa markuu cunuga buuxsho todobo sano, laakin cunuga wuu bilaabi karaa iskoolka hal sano ka hor ama ka dambe. Iskoolka waajibka ah waxuu dhamaanayaa ardayga markuu dhameeyo fasalka sagaalaad.
Waxaad ka akhrin kartaa in badan bogga hey'adda waxbarashada Om svenska skolan ama warbixinida hey'adda waxbarashada looguna tala galay dadka cusub kuna saabsan xadaanada, dugsiga hoose-dhexe, dugsiga sare iyo iskuulka gaarka.
Halkeen carruurteeyda iskoolka ugu diiwaan galiyaa Iswiidhan?
Waxaad boos ka raadsaneeysaa iskoolka xanaanada carruurta ee degmada aad degan tahay. Hadaad rabtid inuu cunugaada dhigo iskool gaar loo leeyahay, adiga ayaa raadsanaya.
Badanaa bogga lagu bandhigo degmooyinka ayaad ka heleysaa leen kugu xiriirinaya warbixin ku saabsan iskoollada xanaanada carruurta ee degmada.
Halkee carruurteeyda iskoolka ka dhiganayaan?
Waa caadi inaad iskool ka dalbato meesha aad degantahay agteeda laakiin waad dalban kartaa iskool wax gaar ah lagu barto. Waxaad xaq u leedahay inaad carruurtaada iskoolka eey rabaan aad u doorto hadeey boos jiraan. Iskoolka waxaa saaran waajib inuu ugu horreeyntii qaabilo ardayda degan nawaaxiga iskoolka. Hadeey jiraan boos saa’id ah waxuu iskoolka qaabilayaa ardayda kale ee degmada. Waxaa jira iskoollo dowladeed iyo kuwo gaar loo leeyahay laakin lama hubo in iskool gaar loo leeyahay uu ku yaallo degmadaada.
Badanaa bogga lagu bandhigo degmooyinka ayaad ka heleysaa leen kugu xiriirinaya iskoollada degmada.
Haduu cunugaada uu dhameystirtay iskoolka xanaanada carruurta isla markaana aad rabtid inuu isla iskoolka sii dhigto ma u baahnid inaad wax sameysid. Hadaadan rabin inuu sii wato isla iskoolka waa inaad la xiriirtaa iskoolka aad rabtid inuu dhigto.
Warbixin dheeraada oo ku saabsan iskoollada iyo isticmalida darajooyinka kala duwan si aad u dooratid iskool waxaad ka heli kartaa Hel oo dooro iskool.
Lacag meey joogtaa in carruurta eey iskool dhigtaan?
Dugsiga hoose dhexe waa waajib Iswiidhan waana lacag la’aan. Taasi waxeey ka dhigan tahay in carruurta oo dhan eey xaq u leeyihiin ineey wax bartaan.
​Dhalin yaro ayaan ahay mar dhow ayaan imid Iswiidhan
Xuquuqdee leeyahay inaan kaligeey yimid?
Waxaad warbixin dheeraada oo ku saabsan carruurta kaligood timaado ka akhrisan kartaa halkaan informationsverige.se
Sideey u shaqeeyaan fasalada lagu diyaariyo ardayda cusub iyo fasalada caadiga ah?
Waa muhiim inaad heshid casharo luqadda iyo kuwo maaddooyin labadaba. Mararka qaar weey adagtahay in la dhigto fasallada lagu diyaariyo ardayda cusub. Ereyo iyo oraahyo badan ayaad rabtaa in laguu fasiro.
Waxaad warbixin dheeraada oo ku saabsan iskoolka Iswiidhan ka akhrisan kartaa halkaan warbixinta ku saabsan Iswiidhan.
Waxaad warbixin dheeraada ka akhrisan kartaa hey’adda sare ee qaabilsan waxbarashada.
Shahaado side ah ayaan u baahanahay hadaan rabo inaan raadsado waxbarashada dugsiga sare?
Meesha la dhaho Utbildningsinfo waxaa yaal qalab la dhaho dooro oo qorsheey waxaadna ka arki kartaa maaddooyinka aad dhameystirtay iyo kuwa lagaaga baahan yahay inaad dhameystirtid si aad u gaartid hadafkaada.
​Waxaan rabaa inaan ogaado sida aan Iswiidhan ugu wareegi karo
Sidey u shaqeeyaan taraafikada guud?
Magaalooyinka inta badan waxa ka jira taraafiik guud oo ay heliin dadka oo dhan. Waxey noqon kartaa tusaale ahaan, basas, tareeno xaafadeed, tareeno dhulka hoosmara iyo maraakiib kuwaasoo isaga goosha boosteejooyin kala duwan ee magalada dhexdeeda ama taren iyo basas isaga goosha magaalooyinka dhexdooda ama tuulooyinka. Magaalooyinka qaarkood xitaa waxaa dhex mera Diyaaradaha maxalliga ah. Xagga Gotland waxaa aada Maraakiib ayadoo ka dhaqaaqaya deked.
Si aad u korto taraafiigaas waxaa lagaa rabaa inaad ka iibsatay tikid. Boggaan www.resrobot.se waxaad ka raadsan kartaa safarada boosteejooyinka kala duwaan ee Iswiidhan. Waxaad kaloo iibsan kartaa tikidyo magaalooyinka iswiidhan oo dhan.
Waxaan rabaa inaan baabuur ku wado Iswiidhan
Waa inaad buuxisid 18 sano isla markaana aad leesin baaabuur lahaataa si aad baabuur u wadid Iswiidhan. Hadaad leesin baabuur ka heysatid wadan kale lama hubo inaad baabuur ku wadi karto leesinkaas.
Leesinkeeyga baabuurka malaga aqoonsan yahay Iswiidhan?
Hadaad leesin baabuur ka heysatid midowga suuqa dhaqaalaha ee yurub (EES) waad ku wadi kartaa baabuur waadna isticmaali kartaa inta leesinkaas laga aqoonsanyahay wadankii lagu sameeyay. Leesinka nuucaas oo kale ah waxaa lagu baddeli karaa kan iswiidhishka ah.
Haddii aad leysin gaari wedid ka haysatid waddan ka baxsan EES laguma beddeli karo leysin swiidhish ah. Haddii aad swiidhan ka diiwaan gashantihid diiwaanka dadweynaha waxaad leysin nuucaas ah ku wedi kartaa gaari ilaa iyo hal sano. Haddii aad diiwaanka dad weynaha Swiidhan ka diiwaan gashaneed in ka badan hal sano leysinku ma shaqeynayo markaa. Haddii aadan diiwaanka dad weynaha Swiidhan ka diiwaan gashaneyn ma jiro waqti go’aan oo ku aaddan inta aad leysin nuucaas ah gaari kula wadan kartid waddanka.
Jidkeen u maraa si aan u helo leesinka baabuurka Iswiidhan?
Barta intarneetka ee guddiga gaadiidka waxaa ku jira warbixin akhris-fudud oo ku aaddan in leysin gaari wedid lagu qaato Swiidhan gudeheeda.